မှန်ကန်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့် ပညာရှိသော အစိုးရလိုသည် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မှန်ကန်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့် ပညာရှိသော အစိုးရလိုသည်
by ပြည်သူ့ခေတ် on Tuesday, December 4, 2012 at 11:38am ·
(၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂)
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညအလွန် သန်းခေါင်ကျော် လင်းအားကြီး အချိန် ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ နံနက် ၃ နာရီခန့်မှာ မုံရွာခရိုင် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ နေကြသော သပိတ်စခန်းလေးခုကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အင်အားသုံး ဖြိုခွဲလိုက်ခြင်းဖြင့် လက်ရှိ အစိုးရလက်ထက် အကြီးကျယ် ဆုံးသော အမှားတစ်ခုကို ကျူးလွန်လိုက်ပါသည်။
မည်မျှပင် ခဲကတ်ဖြေရှင်းရန်ခက်သော ပြည်သူ အစုအဝေးပင်ဖြစ်စေ၊ အကြမ်းဖက် နည်း၊ လက်နက်အင်အား သုံးသည့်နည်းဖြင့် မဖြေရှင်းရဘူး ဆိုသည်က အခြေခံမူပဲ ဖြစ်ပါ သည်။ သပိတ်စခန်းရှိ လူစုလူဝေးကြီးတွင် အများစုက သံဃာတော်များ ဖြစ်နေသည့် အတွက် ပြည်သူအများအတွက် ပို၍ စိတ်ထိခိုက် ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လူဝတ်ကြောင်ဖြစ်စေ၊ သံဃာတော် များဖြစ်စေ အကြမ်းဖက် ဖြေရှင်းခြင်းငှာမထိုက်။ လူဝတ်ကြောင်များ ဆိုလျှင်တော့ လူတွေ ကစပြီး အကြမ်းဖက်တာပါဟု အတင်းငြင်းလို့ ရကောင်းရနိုင်မည် ဖြစ်သော်လည်း၊ သံဃာတော်များ ဖြစ်သည့်အတွက် တစ်ဖက်သတ် အကြမ်းဖက် ဖြေရှင်း ခဲ့ကြောင်း ထင်ရှား သွားခဲ့သည်။ မီးသတ်ပိုက်နှင့် ပက်ကာ လူစုခွဲသည်၊ နောက်မီးခိုးဗုံး၊ နောက်မီးလောင်ဗုံး များဖြင့် ပစ်ခတ်သည်ဟု သိရသည်။ သံဃာတော် အများအပြားနှင့် လူအနည်းငယ် ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရခဲ့ကြသည်။ ဓာတုပစ္စည်းများ ပါဝင်သည့် မီးလောင်ဗုံးများဟု အရပ်က ပြောကြသည်။ မည်မျှ မှန်ကန်သည်ကို တိတိကျကျ မပြောနိုင်သော်လည်း၊ သံဃာတော်များ ရရှိသည့် မီးလောင် ဒဏ်ရာများကတော့ အတော်ပင် ဆိုးဝါးလှတာကို တွေ့ရပါသည်။ သည့်အတွက် တာဝန်ရှိ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ ရဲမှူးကြီး စန်းယုက သြ၀ါဒ ခံယူခြင်းဟုဆိုကာ မုံရွာနယ်မှ သံဃာတော်များကို ပင့်ဖိတ်၍ မိမိတို့ တာဝန်အရ လုပ်ဆောင်ရာမှာ အမှားအယွင်း ရှိခဲ့တာကို ၀န်ခံခဲ့ကြသည်။
ယခုလို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှု မပြုမီကတည်းက အဆိုပါ သပိတ်စခန်းများ ရှိရာသို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်မည်ဟု ကြေညာထား တာ ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်မှ မထွက်ခွာမီ အချိန်ပိုင်းမှာသည်လို ဆိုးဆိုး ၀ါးဝါး ဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်း ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င်၊ ပြည်သူလူထု အရေးအတွက်ဆိုလျှင် မိမိတို့မှာ အမြဲတမ်း တာဝန်ရှိသည်ဟု ခံယူထားကြသော ပြည်သူ့ ဘက်သားများ အချင်းဖြစ်ရာ နေရာသို့ ချက်ချင်းဆိုသလို ရောက်လာကြတာ တွေ့ရသည်။ သီတဂူ ဆရာတော်၊ မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး အစရှိသော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှ ကိုကျော်သူ အစရှိသူတို့။
အားလုံးသော ဆရာတော်ကြီးများ၊ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းတာကို ရှုတ်ချကြ သည်။ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ပြေပြေလည်လည် ဖြေရှင်းရေးကို တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသည် ပျော့ပျောင်းစွာ၊ နိုင်ငံရေး ဆန်စွာ အလုပ်လုပ်ချင်သည့် သဘောထားရှိသည်ဟူ၍ ပြည်တွင်းမှာရော၊ နိုင်ငံတကာ နယ်ပယ်ကပါ ခန့်မှန်းပြောဆို နေကြစဉ်မှာ ယခုလို ဖြစ်လိုက်သည့် အတွက် အတော်ပင် ရုပ်ဆိုးသွားခဲ့ပါသည်။
ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းသောနည်းကို မသုံး နိုင်ရပါမည်လဲ။
အစိုးရ တစ်ရပ်အနေဖြင့် ဖြစ်ပျက်နေသည့် ကိစ္စရပ် အားလုံးကို ချက်ချင်း ပြန်လည် သုံးသပ်၍ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် ချမှတ် ဆောင်ရွက်စရာများ ပေါ်လာပါသည်။ အကြမ်း ဖက်နည်း စဉ်းစားထားသည်များရှိလျှင် အားလုံးကို ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်း၍ အမြော်အမြင်ရှိရှိ ပညာဉဏ်ကြီးကြီး ရှုမြင်ရမည်ဟု ထင်ပါသည်။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များ အတွက် အစိုးရ အနေဖြင့် တာဝန် ရှိကြောင်း နားလည်ဝန်ခံပြီး ငြိမ်းချမ်းပြေလည်စွာ ဖြေရှင်း နိုင်ရေးကို အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး လူထုကို ကတိပြုသင့်သည်။ ဖြေရှင်းနိုင်ရေး နည်းလမ်း များကိုလည်း အစွဲ ကင်းကင်းဖြင့် ရှာဖွေသင့်သည်။
နိုင်ငံရပ်ခြား လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ယခင်အစိုးရတို့၏ ကတိက၀တ် စာချုပ်များကို သေချာ စေ့ငုစွာ လေ့လာပြီးမှ လက်ရှိအစိုးရက မည်မျှ၊ မည်သို့ တာဝန် ဆက်လက် ယူနိုင်မည်လဲ ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ရမှာလည်း ရှိနေပါသည်။ နှစ်နိုင်ငံအကြား ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များကို နောက်ဆက်ခံသည့် အစိုးရများက ဆက်လက် တာဝန်ယူရတာရှိ နေသလို၊ အဆိုပါ မူလ သဘောတူညီချက်များ၏ တရားဝင်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ အချက် အလက်များ ပြည့်စုံညီညွတ်မှု စသည်တို့ အမှန်တကယ် ရှိဖို့ကလည်း အရေးကြီးတာဖြစ်သည်။ ဘက်ပေါင်းစုံမှ မျှတစွာ၊ တရားနည်းလမ်းကျစွာ၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ စဉ်းစား ချင့်ချိန်ပြီး အဖြေရှာရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ယခု လောလောဆယ် ကြားသိရသော သတင်းအရ၊ ယင်းပြဿနာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်တစ်ခု ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သမ်္မတ၏ လက်မှတ်ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ယင်းကော်မရှင်ကို ခေါင်းဆောင်မည့်သူမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟု သိရပါသည်။ အားလုံးသော ပြဿနာများ ချက်ချင်း ပြေလည်သွားမှာ မဟုတ်သော်လည်း ဒါက မျှော်လင့်ချက်ရှိသော သတင်းကောင်းတစ်ခုဟု ယူဆရပါသည်။
ယင်းကော်မရှင်က အဓိကလုပ်ငန်းများ အနေဖြင့်၊ ကြေးနီစီမံကိန်းဟာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံဩန်း၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ မရှိ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လို ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများ သက်ရောက်နိုင် သည်လဲ၊ စီမံကိန်းကြောင့် နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိမရှိ၊ စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းရန် တောင်းဆို ဆန္ဒပြမှု၏ အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ၊ ဆန္ဒပြမှုကို ထိန်းသိမ်းရာ၌ သံဃာတော်များ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသည့်အပေါ် သုံးသပ်ချက်၊ စီမံကိန်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သင့် မသင့်၊ နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ အချက်အလက်များအရဆိုလျှင် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာက ကြေးနီစီမံကိန်း ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာမှာ အဓိကကျသည့် နေရာမှာ ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါ သည်။ အစီရင်ခံစာကို ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ အမီ တင်ပြရန်လည်း တောင်းခံထားတာ တွေ့ရပါသည်။ ကော်မရှင်၏ စိစစ်သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာပေါ်မှာ မူတည်လက်ခံပြီး အစိုးရက မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ကာ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့် မည်။
ပြည်သူ့ အင်အားစုများ အနေဖြင့်မူ လက်ရှိ အခြေအနေ ကို ပိုမို ပြင်းထန်ရန်လိုသည့် စစ်ပွဲ ဖြစ်မသွားအောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ ကြိုးစားချင်ကြပါသည်။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်များကို အလွန်ပင် စိတ်ထိခိုက်၊ ဒေါသထွက်ကြသော်လည်း ဒါကို အခြေပြု၍ ပိုမို ကြီးကျယ်သော ပဋိပက္ခ ဖြစ်လာမှာကို မလိုလားကြပါ။ ဒါဟာ အမျိုးသားချင်း ရေဆုံးရေဖျား ဆင်နွှဲရမည့် တိုက်ပွဲဟု မယူဆကြပါ။ အမျိုးသား သင့်မြတ်ရေးမူကို စွဲမြဲ ဆုပ်ကိုင်ထားလိုကြတာ ဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိ အနေအထားများကို သုံးသပ် ပြောဆိုရမည်ဆိုလျှင် အစိုးရ၏ စိတ်သဘော ထား မှန်ကန်မှုက အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီး တာ ဖြစ်ပါသည်။ ဂုဏ်သိက်္ခာရှိသောနိုင်ငံ၊ ငြိမ်းချမ်းသော နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ပညာရှိသော အစိုးရ၊ ပညာဉဏ် ကြီးသော အစိုးရဖြစ်ဖို့က အရေးတကြီး လိုအပ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းရေးပြည်ရာ ပြဿနာများကို လူမိုက်လို ဖြေရှင်းလို့ မရနိုင်ပါ။ ပညာရှိလို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လိုပါသည်။
This entry was posted on December 5, 2012, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ကြမ်းတမ်းရက်စက်သည့်အခြေအနေများကြောင့် ရိုဟင်ဂျာများထိတ်လန့်မှုများပြားလာ
တမန်တော်မြတ်(စွ)၏အင်္ကျီ Prophet Mohammad’s wearing KURTA →